Bvunzurudzo - Zvinyorwa Nhau | Zvinyorwa Nhau (Peji 2)
Marta Gracia Pons munyori uye mudzidzisi. Akapedza kudzidza muNhoroondo kubva kuAutonomous University yeBarcelona uye zvakare ane ...
Rafa Melero aunza Chibatiso mhedzisiro. Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu uye mutsa mukundipa iyi bvunzurudzo.
Mar Aísa Poderoso anobva kuZaragoza, purofesa ane degree muNhoroondo uye munyori. Nhoroondo yake yazvino ndeye Ndiani akaona ...
Munyori Clara Peñalver, munyori weSublimation, anotaura nesu muhurukuro iyi nezvenyaya yake nedzimwe nyaya dzakawanda.
Munyori anobva kuGranada Mario Villén Lucena anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotaura nezvenyaya yake yazvino, Nazarí, uye nezvimwe zvese.
Carolina Molina ndiye munyori weLos ojos de Galdós uye mune iyi bvunzurudzo anotitaurira nezvenyaya yake uye mimwe misoro yakawanda.
Bhuruu Jeans anotsunga nekubata kwechakavanzika mune yake nyowani nyowani, Iyo Camp. Muhurukuro iyi anotiudza nezvake uye nezvimwe zvakawanda.
Jesus Valero anobva kuSan Sebastián, Chiremba muBiological Sayenzi uye pari zvino ari pamusoro peTecnalia, iyo yepakati nzvimbo ...
Juan Tranche anoita kutanga kwake mumabhuku naSpiculus, nhoroondo yenhoroondo yakaiswa muAkare Roma. Mune ino bvunzurudzo anotaura nezvake uye nezvimwe zvakawanda misoro.
Berna González Harbor ine bhuku idzva rakanzi El pozo. Mune ino bvunzurudzo anotaura nezvake uye nezvimwe zvakawanda misoro.
Rafael Caunedo akaburitsa bhuku rake razvino mwedzi uno, Chido che Tsaona. Muhurukuro iyi anotiudza nezvake uye nezve zvese zvishoma.
Paula Gallego ane nyowani nyowani, Iyo inki inotibatanidza. Muhurukuro iyi anotiudza nezvake uye nezvimwe zvakawanda.
Sara Gutiérrez ndiye munyori weThe Last Zhizha reUSSR. Muhurukuro iyi anotiudza nezve basa iri uye nezvimwe zvakawanda.
Varume Marías vakaburitsa yekupedzisira Chivabvu bhuku rake rekupedzisira rakanzi La Último Paloma. Mune ino bvunzurudzo iye anotaura nezvake uye zvese zvishoma.
Munyori Rosa Ribas anondipa iyi bvunzurudzo kubva kuFrankfurt kwaanotiudza zvishoma nezve zvese. Ndinoonga chaizvo nguva yako.
Consuelo López-Zuriaga anga ari mufainari wekupedzisira Nadal Mubairo pamwe neruzivo rwake Zvichida muna Autumn. Muhurukuro iyi anotiudza nezvake uye nezvimwe zvakawanda.
Arturo Sánchez Sanz munyori ane mukurumbira wenyaya dzinoverengeka, yekupedzisira pane mufananidzo waBelisarius. Muhurukuro iyi anotaura nezvake uye nedzimwe nyaya dzakawanda.
José Calvo Poyato aburitsa yake nyowani nyowani, La travesía yekupedzisira. Mune ino bvunzurudzo anotiudza zvishoma nezvake uye nezve dzimwe nyaya zhinji.
Paz Castelló anopa nyowani nyowani yakanzi Hakuna mumwe wedu anozove netsitsi. Muhurukuro iyi anotiudza nezvake uye nezvimwe zvakawanda.
Daniel Martín Serrano anoita kutanga kwake munoverengera neInsomnia, asi munyori uyu uye munyori wezvekunyora atova nebasa refu. Tinozviongorora muhurukuro iyi.
Esteban González Pons wezvematongerwo enyika, asi anonyora zvakare uye akatanga kuratidzira munoverengero naEllas. Mune ino bvunzurudzo anotiudza nezve rake rekunyora chikamu.
Blas Ruiz Grau akatanga kuzvishambadza uye ikozvino munyori anotengesa zvakanyanya. Mune iyi bvunzurudzo nemunyori weSaga Mors anotiudza zvishoma nezve zvese.
Julio César Cano ane bhuku idzva. Iri zita rechishanu rinotarisana nemuongorori wake Monfort. Mubvunzurudzo iyi anotaura nezve zvese zvishoma.
Noelia Amarillo, munyori weMadrid wenhau dzerudo uye dzerudo, anotipa iyi bvunzurudzo umo anotiudza zvishoma nezve zvese.
Laura Mas anoita kutanga kwake mumabhuku aine nhoroondo yenhoroondo, La maestra de Sócrates. Muhurukuro iyi anotiudza zvishoma nezve zvese.
Leticia Sierra, Asturian uye mutori wenhau, akaita kusvetuka kumabhuku neMhuka. Muhurukuro iyi anotiudza nezvake nezvimwe.
Jesús Sánchez Adalid ane chinyorwa chitsva, Las armas de la luz, uye mune ino bvunzurudzo anotaura nezvazvo uye nezvimwe zvinyorwa zvekunyora.
Benito Olmo achangobva kuburitsa nyowani nyowani, El gran rojo. Muhurukuro iyi anotiudza nezvake uye nezvese zvishoma zvishoma futi.
Toni Hill ane chinyorwa chitsva, The Dark Goodbye naTeresa Lanza, uye mune iyi bvunzurudzo anotaura nezvake uye nezvimwe zvakawanda misoro.
Luis Castañeda, anokunda iyo 2020 Amazon Storyteller Literary Mubayiro wenhau yake Kana Mambo auya, anondipa iyi bvunzurudzo.
Esteban Navarro ndomumwe wevanonyanya kushambadza uye vanozivikanwa vanozviparadzira vega vanopara mhosva. Nhasi anotipa iyi bvunzurudzo.
Luis Villalón munyori uye bhuku rake razvino rakaburitswa ndiEl cielo sobre Alejandro. Muhurukuro iyi anotiudza nezvake uye nezvimwe zvakawanda.
Olga Romay Pereira, munyori wenhoroondo munyori, anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotaura nezvebasa rake nezvimwe zvakawanda.
Munyori Julio Alejandre, munyori weZvitsuwa zvePoniente, anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Santiago Díaz ane nyowani nyowani kubvira yekupedzisira 14th, Ivo Baba Vakanaka. Anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza nezvake uye nezvimwe zvakawanda.
Martín Casariego, munyori anobva kuMadrid, munyori we ini ndinoputa kukanganwa kuti unonwa, anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotaura zvishoma nezve zvese.
Mikel Santiago anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve mabhuku ake, vanyori uye mapurojekiti.
Patricia Pérez naJulio Santos ndivo vakasika Txano na Óscar, rakabudirira nhevedzano yemabhuku evana. Nhasi tinotaura navo muhurukuro iyi.
Carlos Bassas del Rey anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese nezve ake aanofarira mabhuku uye vanyori, mapurojekiti uye nezvimwe.
Baltasar Magro. Kubvunzana nemunyori waMaría Blanchard
Baltasar Magro mutori wenhau uye munyori, uye gore rino akaburitsa bhuku idzva rakanzi "María Blanchard." Tipei iyi bvunzurudzo.
Javier Pellicer, munyori wenhoroondo wenhoroondo, anotaura nesu muhurukuro iyi nezvemabhuku, vanyori, mapurojekiti uye chiitiko chekutsikisa.
Rosa Liksom. Kubvunzana nemunyori weMukadzi waColonel
Rosa Liksom, munyori wekuFinland uye muimbi, anoburitsa runyorwa rwake rwekupedzisira, Mukadzi weColonel. Mubvunzurudzo iyi anotaura nezve zvese zvishoma.
Paco Gómez Escribano, munyori wenyaya yematsotsi, anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotaura zvishoma nezvese uye nebasa rake razvino, 5 jotas.
Jon Arretxe. Kubvunzana nemunyori we Kusavimba, chikamu chechinomwe cheToure
Jon Arretxe anondipa iyi bvunzurudzo pachiitiko chekuparurwa kwekusavimba, bhuku rechinomwe rinotarisana nemutikitivha wake Touré.
Kubvunzana naFernando Lillo, purofesa wemitauro yechinyakare uye munyori weZuva muPompeya, kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Pablo Nuñez, iye munyori wenhoroondo yenhoroondo kubva kuna Lugo, anotaura nesu muhurukuro iyi nezve enganonyorwa dzake, vanyori, zvinofurira, mapurojekiti uye nezvimwe.
Paco Álvarez anopa rondedzero yake nyowani "Tinopenga, vaRoma ava" uye anondipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Sandra Aza munyori wenhoroondo munyori. Mune ino hurukuro yakakura, anotaura nezve zvese zvishoma sekunge akatinyorera imwe.
César Pérez Géllida ane runyorwa nyowani, Rombo Remurume, iyo yaari kuratidza izvozvi. Nhasi anotipa iyi yakajeka hurukuro.
Ana Alcolea anoratidzira bhuku rake El Brindis de Margarita uye anopa iyi bvunzurudzo kwaanotaura zvishoma nezve zvese.
Alexis Ravelo ane nyowani nyowani uye mune iyi bvunzurudzo anotiudza zvishoma nezve zvese: zvaanoita, mabhuku, mapurojekiti kana mamiriro azvino.
Olalla Garcia. Kubvunzana nemunyori we «Vanhu vasina mambo»
Olalla García munyori wenhoroondo dzekare uye yake yazvino nyowani ndeye "Pueblo sin rey." Nhasi anotipa iyi bvunzurudzo.
Sebastián Roa achangobva kuburitsa yake yazvino nyowani, Nemesis. Uye mune ino bvunzurudzo anotiudza zvishoma nezve mabhuku, vanyori uye panorama yezvino.
Gervasio Posadas aburitsa yake nyowani nyowani, El mercader de la muerte. Nhasi anotipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Marto Pariente akahwina iyo IV Nhema Novel Prize muCagagena Negra. Mubvunzurudzo iyi anotaura nezve zvese zvishoma.
Don Pardino: «Kunyora zvakanaka kufunga nezvevamwe»
Don Pardino ndomumwe weavanozivikanwa mazita pa internet. Iye achangobva kuburitsa yake yekutanga graphic novel uye anotipa iyi bvunzurudzo.
Guillermo Galván, musiki wemuratidziri Carlos Lombardi, anotiudza nezvevanyori vaanofarira, mabhuku uye vatambi, mapurojekiti matsva uye zvimwe zvakawanda.
José Ramón Gómez Cabezas: «Kukunda muverengi kukwira Everest»
José Ramón Gómez Cabezas, Ciudad Chaiye-akaberekerwa mhosva yemunyori, anotiudza nezvevanyori vaanofarira, vatambi uye mabhuku, mapurojekiti ake nezvimwe zvakawanda.
Susana Rodríguez Lezaun, munyori uye director wePamplona Negra, anotiudza zvishoma nezve zvese uye nezve iri kuuya edition yemutambo muguta reNavarran.
Toti Martínez de Lezea munyori anozivikanwa wenhoroondo. Muhurukuro iyi anotiudza nezvemabhuku ake, vanyori vaanoda uye mapurojekiti matsva.
Radiyo uye zvinyorwa II. Kubvunzana nemushambadzi Paco de León
Zvinofadza uye kukudzwa kuva nezvakawanda kubva kunhepfenyuro yeSpanish saPaco de León mune iyi bvunzurudzo nezve zvinyorwa paredhiyo nezvimwe zvakawanda
Nhepfenyuro nezvinyorwa I. Zvirongwa zvekunyora redhiyo yanhasi
Kuongororwa kwezvirongwa zvekunyora zvatingakwanise kuwana paradio. Uye zvakare mune podcast fomati. Kuteerera zvinyorwa pane zvinodiwa.
Paco Roca (Valencia, 1969) ndomumwe wedu anoteverwa, mukurumbira uye epasirese mareferenzi ema comics uye graphic novels…
Miguel Ruiz Montañez. Kubvunzana nemunyori weRopa reColumbus
Miguel Ruiz Montañez akaberekerwa muMalaga muna 1962 uye akazova injinjini, asi akazopedzisira azvipira mukudzidzisa uye, pa…
Domingo Villar, akakurumbira Galician mhosva yekunyora, munyori weInspector Leo Caldas, anotiudza nezvemabhuku ake, vanyori uye zvirongwa zvinotevera
Simon Scarrow haadi kuiswa. Zvirokwazvo kwete kana iwe uchifarira nhoroondo yenhoroondo. Zvakaoma kuwana ...
Isabel Abenia munyori anobva kuZaragoza uye munyori wenhoroondo dzezvakaitika uye nhasi anotipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Antonio Cabanas, munyori ane mukurumbira wenhoroondo yenhoroondo, anotipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese nezve mabhuku, vanyori vaanoda uye zvirongwa zvitsva.
Antonio Pérez Henares achangobva kuburitsa yake nyowani nyowani, Cabeza de Vaca. Mune ino bvunzurudzo anotitaurira zvishoma nezve kuverenga kwake uye zvinofurira.
Jorge Molist, munyori wenhoroondo anozivikanwa, anotaura nesu muhurukuro iyi nezve mabhuku avanoda uye vanyori, zvinokonzeresa nezvirongwa zvake zvitsva.
Munyori Luis Zueco ane chinyorwa chitsva, The Book Merchant. Anotipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese nezve mabhuku nemapurojekiti.
León Arsenal, anonyanya kuzivikanwa semunyori wenhoroondo, anotipa iyi bvunzurudzo kwaanotaura nezvese zvishoma.
Pedro Santamaría munyori wenhau dzakaitika. Bhuku rake razvino rakanzi Pakushandira humambo. Nhasi anotipa iyi bvunzurudzo.
Teo Palacios, munyori weLa boca del diablo pakati pemamwe mabhuku, anotipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Carlos Dosel, Cartagena munyori uye musiki weInspector Javier Manzano, anotipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Megan Maxwell anga ari, aripo, uye acharamba achive anotengesa zvakanyanya romance novel munyori. Nhasi anotipa iyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Munyori Arantza Portabales anotipa bvunzurudzo kwaanotaura pamusoro penyaya dzakasiyana-siyana: vanyori vaanofarira uye mabhuku kana zvaanozvivaraidza nazvo semunyori.
Iye munyori weBasque Iñaki Biggi akahwina iyo Cerros de osbeda mubairo wenhoroondo yenhau naValkirias. Nhasi anoisa hurukuro iyi kwatiri iyo yandinomutenda zvikuru.
Kubvunzana naMercedes Santos, munyori parwizi uyo anounza yake nyowani nyowani: Sitiados. Anotiudza nezvake uye zvimwe zvinhu zvakawanda nezve rake basa.
Kubvunzana naMaribel Medina, purezidhendi weVakadzi Nguva uye munyori weRopa trilogy.
Tine rombo rakanaka rekuve pablog redu nhasi Maribel Medina, (Pamplona, ​​1969) mugadziri weTrilogy yenhau nhema ...
Tine mufaro wekuva naInés Plana (Barbastro, 1959) pane yedu blog nhasi, munyori wezaruro 2018, kubudirira kubudirira mu ...
Nhasi tinobvunzurudza munyori José Zoilo Hernández, munyori we trilogy Las cenizas de Hispania, nezve rake basa, zvinokuvaraidza, mabhuku aanofarira nezvimwe zvakawanda.
Bvunzurudzo yakasarudzika naJael Lopumo: «Ndiri kufara nezve kuburitswa kwaLito en Marte naKaizen Editores»
Nhasi, muActualidad Literatura tinobvunzurudza Yael Lopumo (Buenos Aires, 1989), mufananisi weArgentine ane kugamuchirwa kukuru pasocial network kwakatungamira kuNhasi, muActualidad Literatura tinobvunzurudza Yael Lopumo (Buenos Aires, 1989), mufanisi weArgentine ane kugamuchirwa kukuru mumasocial network zvakatungamira Kaizen Editores kumutarisa kune iro bhuku rebasa Lito en Marte, iro richaburitswa munguva pfupi inotevera kufadza vateveri vake vese.
Vaverengi veSpanish vanosarudza bhuku redu rinotevera kunyanya neshoko remuromo (vanopfuura 50% yevaverengi), na ...
Kubvunzana naRG Wittener, musiki weMonozuki.
Kubvunzana naRG Wittener (Witten, Germany, 1973), Spanish munyori wenyaya uye enganonyorwa yesainzi fungidziro, fungidziro, uye kutya.
Kubvunzana naJulio César Cano, musiki weiye mukuru Inspector Monfort.
Isu tinofara kuva naJulio César Cano, (Capellades, Barcelona, ​​1965) mugadziri wenyaya dzakateedzana pane yedu blog nhasi ...
Tine ropafadzo uye mufaro wekuva naRicardo Alía (San Sebastián, 1971), munyori we ...
Tine mukana nerufaro rwekuva naDavid Zaplana (Cartagena, 1975) naAna Ballabriga pane yedu blog,…
Ana Lena Rivera, anokunda weTorrente Ballester Prize 2017 uye munyori weLo que callan los muertos, anotipa hurukuro inoburitsa pachena.
Ini ndinovhura gore rekubvunzurudzwa nemunyori uye munyori wechiratidziro Ángel García Roldán, wandinotenda nekutibata kwake nenguva ...
Nhasi ndinotaura nemunyori weAsturian Malenka Ramos, wandakasangana naye munzvimbo idzi nekuda kwechinhu chakajairika cheNordic: ...
Estela Chocarro, munyori, munyori wenyaya yematsotsi akateedzera mutori venhau Víctor Yoldi uye nyanzvi yehunyanzvi Rebeca Turumbay.
Nhasi ndinotaura nemunyori uye wega mutikitivha Rafael Guerrero nezve rake basa, zvinofurira, vanyori vaanofarira nemabhuku, nezvimwe. Ndinoonga nguva yenyu.
Nhasi ndiri kutaura naJavier Alonso García-Pozuelo, munyori weLa cajita de snuff, bhuku reutikitivha rinotarisana naInspector Jose María Benítez.
Kubvunzana naMaría José Moreno, munyori weTrilogy of Evil
María José Moreno (Córdoba, 1958), munyori, chiremba wepfungwa uye munyori weTrilogy of Evil, iyo ichakurumidza kupfurwa muchimiro cheterevhizheni.
Kubvunzana naSantiago Díaz Cortés, munyori weTalión: Iye protagonist anosarudza kushandisa yake yekupedzisira mwedzi miviri yehupenyu achishandisa mutemo weTalión.
Munyori weSonarás bajo las Aguas, inoverengeka yekufungidzira inotarisa muongorori Petunia Prado del Bosque, yakagadzika pamhenderekedzo dzeGungwa reCantabrian.
Xabier Gutiérrez, San Sebastián, 1960, mugadziri we gastronomic noir, mune iyo mhando yemhando inoitika pakati pezvitofu nemasaini madhishi. Xabier ndomumwe wevabiki vane mukurumbira munyika medu uye munyori weTetralogy Los Aromas del Crimen, achitarisana nemusikana-komisheni weErtzaintza, Vicente Parra.
Roberto Martínez Guzmán, munyori wevatema akateedzana naEva Santiago «Kwandiri, muverengi wega wega anosarudza rimwe remabhuku angu iropafadzo, nekuti anoisa nguva yake nekuvimba kwandiri. Zviri mumaoko angu izvo zvandiri kuda kudzokorora. Uye kumuita kuti ave nechokwadi kunonetsa. "
Kubvunzurudza naEsteban Navarro: munyori wenhau dzematsotsi uye mupurisa.
Esteban Navarro ndiMurcian nekuzvarwa uye kubva kuHuesca nekutorwa, mupurisa wenyika uye munyori, munyori wemhando dzakasiyana-siyana uye anodisisa nezverudzi rwevatema, muzvinafundo paCanarian School of Literary Creation, Musiki weMapurisa neCultest Contest, Mubatsiri weAragón Negro Mutambo uye mushandi wemapepanhau akati wandei.
Kubvunzana naVíctor del Arbol, Nadal Mubairo 2016.
Víctor del Árbol inogadzira nyaya yematsotsi chimwe chinhu kupfuura rudzi. Imwe neimwe yenyaya yavo yakasiyana, inotanga kubva pakutanga, hapana chinotarisirwa. Hapana emanoveli ake anogadzirira muverengi anotevera.
Isu tinofara kuva naGabriel Martínez pane yedu blog nhasi, aine mapfumbamwe akaburitswa enoveli, ese ari kuAmazon, imwe yacho, El Asesino de la Vía Láctea, Amazon yepamusoro yekutengesa uye La Estirpe del Cóndor, 2014 Azorín Award Finalist.
Nhasi taita hurukuro iyi naIsabel Coixet yemufirimu wake uchangoburwa "Raibhurari" zvichibva mubhuku raPenelope Fitzgerald. Mufaro chaiwo
_Game reZigaro_. Chii chinoverengwa naJon Snow? Yakasarudzika neKit Harington
Nhasi tine yakasarudzika yakasarudzika. Actor Kit Harington, ane mukurumbira Jon Snow kubva mune yakadomwa nhevedzano _Game yeTrones_ inotaura nesu nezvekuverenga kwake.
Marcos Chicot, munyori we Kuurayiwa kwePythagoras, anova wekupedzisira ku2016 Planet Prize pamwe nerinozi Kuurayiwa kwaSocrates.
Isu tinotaura naDolores Redondo, akahwina iyo 2016 Planeta Prize nebasa rake Izvi zvese zvandichakupa, inoverengeka yakaiswa muGalician Ribeira Sacra.
Kubvunzana nemunyori Elísabet Benavent
KuActualidad Literatura, takave nemufaro wekugona kubvunzurudza munyori wechiSpanish Elísabet Benavent, munyori wemabhuku ayo…
Stephen King naGeorge RR Martin vanotaura nezve kudzora pfuti
Vanyori Stephen King naGeorge RR Martin vakataura mubvunzurudzo nezve kudzora pfuti nemaonero avo.
Kubvunzana naRafael Santandreu, chiremba wezvepfungwa uye munyori we "Magirazi emufaro" uye "Unyanzvi hwekusaita hupenyu kuvava".
Kubvunzurudza na Ángel Delgado, munyori wemabhuku akati wandei akazvitsikisa
Nhasi tinokuunzira iyi bvunzurudzo na Delngel Delgado, munyori wemabhuku akati wandei akazvitsikisa-ega. Iko kuseka
INOKOSHA: Iyezvino Zvinyorwa Kubvunzana naDrew Hayden Taylor
Panguva yechiitiko che "Midhudhudhu neBison Grass", Actualidad Literatura akave nemufaro wekubvunzurudza Drew Hayden Taylor, munyori.